I-NordVPN Netflix (2020) - Manje Buka Ngaphandle kwe-USA kalula! - Ungakwenza Kanjani
INetflix yinto iningi lethu elingenakuphila ngaphandle kwayo, kepha okubuhlungu yilapho ubona ukuthi kuningi kakhulu ku-Netflix, ongeke ukwazi ukukufinyelela ngenxa yemikhawulo yeseva.Ngabe ufuna i- I-VPN ukusakaza iNetflix ? Ufuna ukuthenga i-VPN kepha ulinde izaphulelo? Yebo, usendaweni efanele ngaleso sikhathi ngoba sithole okungcono kunawo wonke ama-VPN ngezidingo zakho ze-Netflix, futhi, ngezaphulelo ezinhle kakhulu.
I-NordVPN iyi-VPN esheshayo nephephile ezokugcina uqhubeka nazo zonke izidingo zakho ze-Netflix futhi ikusize ukuthi udlulise amehlo ngokuphephile ngaphandle kokuzwa ukwehla kwejubane. Sikwenzele umhlahlandlela omuhle kakhulu wokufuna izaphulelo ezipholile nokwazi ukuthi ungasebenzisa kanjani i-NordVPN yeNetflix.
I-NordVPN yeNetflix - Izinyathelo zokufuna isaphulelo seNordVPN
Izaphulelo ziyinto sonke esiyithandayo; ngubani ongafuni ukonga imali ethile ekwenzeni noma yikuphi ukuthengwa. Uma futhi ufuna i-VPN ekunika isaphulelo esimnandi, usendaweni efanele. Sizokuhamba ngokuthi ungasifaka kanjani isicelo sezaphulelo ezinhle kakhulu ekuthengeni i-NordVPN.
Ngokungafani nama-VPN amaningi ahlinzeka ngamakhodi amakhuphoni nezixhumanisi zesaphulelo okunzima ukulandela futhi ezingekho emthethweni, iNordVPN inikeza izaphulelo ezinhle kumakhasimende abo kuwebhusayithi yabo esemthethweni uqobo.Ukuze wazi okwengeziwe, landela izinyathelo zethu.
Isinyathelo 1: Iya kuwebhusayithi esemthethweni yeNordVPN.
Chofoza lapha ukuqondiswa kabusha kwiwebhusayithi esemthethweni yeNordVPN, lapho ungathola khona ukufinyelela ezinhlelweni zabo zamanani. Ungabuye uhlole isayithi labo ukwazi izici eziningi nolunye ulwazi ku-NordVPN.
Isinyathelo 2: Hlaziya amapulani nezaphulelo.
Ukukhetha uhlelo olungahleliwe olunesaphulelo esihle ngeke kukusize; udinga ukukhetha ngempumelelo uhlelo olunikeza okudingayo futhi ekunikeza izaphulelo eziningi. Banobubanzi obuhle bezinhlelo ezitholakalayo, futhi ungazihlola nge ngokuchofoza lapha .
Isinyathelo 3: Khetha uhlelo oluthandayo.
Banazo izaphulelo ezifika kuma-68%; khetha uhlelo olunikeza izinzuzo eziphezulu bese uqala ngokuqedela ukukhokha ngalo.
Isinyathelo 4: Inkokhelo
Faka imininingwane yakho efana negama, ikheli le-imeyili, kanye neminye imininingwane yokukhokha, futhi uzosethwa ukuthi uzothokozela isaphulelo esihle ngeNordVPN.
Sithemba ukuthi sikujabulisile ngokukunikeza indlela yokuthi ungasifaka kanjani isicelo sesaphulelo esihle kakhulu. Qhubeka ufunde ukuze wazi ezinye izinzuzo ezifakiwe zeNordVPN ezifaka ukusakazwa kweNetflix nokunye okuningi.
Ungayibuka Kanjani iNetflix NgeNordVPN?
Kungumzamo wokubuka iNetflix ngeNordVPN. Lapho ususebenzise ikhodi yethu yesaphulelo futhi wabhalisela i-NordVPN, i-VPN izoyifaka kusistimu yakho.Uma usufakiwe, faka imininingwane yakho yokungena ngemvume ukuze ukwazi ukuqala nge-NordVPN.
I-NordVPN ine-interface yomsebenzisi elula kakhulu yokwenza ukuthi uyisebenzise kanjani i-VPN.Ikhasi labo eliyinhloko linenkinobho yokubulala ebaluleke kakhulu, ivule, bese i-VPN yakho izoqala ukusebenza ngokuzenzakalela. I-NordVPN inikeza abasebenzisi bayo ukutholakala okuhlukahlukene kweseva lapho abasebenzisi bangakhetha khona. Kufanele uvivinye amaseva futhi uhlole ukuthi iyiphi iseva ekunikeza ukufinyelela nesivinini esikhulu sokusakaza.
Ngokukhetha iseva engcono kakhulu kuwe, ungangena kalula kwi-Netflix ngaphandle kokukhathazeka nhlobo. Sakaza okungenamkhawulo ngaphandle kokuzwa ukusikeka kwejubane noma ukuphazamiseka kuphela ngeNordVPN.
Kungani i-Netflix ivimba umhlinzeki we-VPN?
Uma ungumsebenzisi weNetflix okhona, usuyazi vele ukuthi iNetflix ikhawulela abasebenzisi ukuthi babuke okuqukethwe okutholakalayo ukuze bakubuke esifundeni esithile. Izibonelo ezilula kakhulu ukungatholakali kwezinhlelo zeNetflix UK kwiNetflix US, kanye nokuntuleka okufanayo kwemibukiso yeNetflix US kuNetflix UK,Abasebenzisi abaningi bazama ukufihla ikheli labo le-IP besebenzisa i-VPN bese bezama ukufinyelela kwi-Netflix, kepha banezinqubo ezanele zokuphepha ezingavumeli ama-VPN ukuthi afinyelele okuqukethwe.
Lesi yisona sizathu esikhulu sokuthi ungakwazi ukusakaza nganoma iyiphi i-VPN kuNetflix.Uma ufuna ukusakaza i-Netflix nge-VPN, ungakhathazeki. INordVPN yisixazululo esisodwa sokumisa inkinga yakho.
Kungani ukhetha i-NordVPN ukufinyelela i-Netflix?
INordVPN iyi-VPN ephephe kakhulu, evikelekile, futhi eshesha kakhulu ngosizo ongadingi ukuthi ukhathazeke nakancane ngokuphazamiseka. Ungapheqa, usakaze, usebenze ngaphandle kokuhlupheka
Kuyi-VPN eqhamukayo encintisana nokuthandwa yi-Express VPN namanye ama-VPN aphezulu emakethe. Isizathu esiyinhloko sokuya kwakho kwe-NordVPN ukufinyeleleka kwayo okuhle kakhulu nokusebenziseka kalula komsebenzisi. Ngeke uze uzizwe ukuthi i-VPN isebenza ngemuva; konke kuzoba bushelelezi.
I-NordVPN inendawo ebalulekile yeseva ongakhetha kuyo njengokulula kwakho futhi ujabulele ukuphequlula okuphephile ngaphandle kokukhathazeka. Kepha akuzona kuphela izindawo zeseva ezenza i-NordVPN ibe yi-VPN enhle kakhulu; bafihla ngempumelelo ikheli lakho le-IP ukuze kungalandelwa lutho noma kulandelwe kuwe.
Ngaphandle kwalokhu, i-NordVPN inezici eziningi okufanele wazi ngazo ngaphambi kokuqala ukusebenzisa uhlelo lokusebenza. Ake sibheke izici ezinhle kakhulu ezihlanganisiwe ukwenza le VPN ibe engcono kakhulu.
Kungenzeka bangabi nesivivinyo samahhala, kepha baphakathi kwama-VPN aphezulu akholelwa ukuthi ukuhlolwa kufanele kufike ngentengo; banikela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kumnandi ezinhlelweni zabo. Uma uthanda i-VPN, ungayisebenzisa. Uma kungenjalo, ungafaka isicelo sokubuyiselwa imali ngokugcwele zingakapheli izinsuku ezingama-30.
I-VPN enhle idinga ukubethela okuqinile ukuze kuphephe kubasebenzisi futhi ivikele yonke idatha yabo. INordVPN iza nokubethela kwe-AES okungama-2048-bit kubasebenzisi bayo okunikeza ukuvikelwa kokugcina.
Inqubomgomo eqinile yokungena
I-VPN egcina idatha yakho ingahlala iyisebenzisa kabi, noma abanye abaduni bangantshontsha idatha yakho. Yilapho i-VPN enenqubomgomo eqinile yezingodo ingangeni kalula; kuzokusiza uphephe njengoba kungekho datha yakho noma izingodo ezirekhodwayo; imininingwane yakho iphephile. INordVPN ibuye ilandele inqubomgomo eqinile yama-No-logs.
Umkhawulokudonsa umthamo esizosebenza ngaphakathi kwawo; uma kukhulunywa ngeNordVPN, baneBandwidth engakholeki kakhulu abangayinikeza abasebenzisi babo lokho
24/7 Ukusekelwa Kwamakhasimende
I-VPN ngaphandle kokusekelwa kwamakhasimende ngeke isize kunoma ngubani. Umuntu angacabanga ukuthi abadingi ukwesekwa kwamakhasimende, kepha sonke siyazi, ukusebenza ngezinga elikhudlwana kuletha isidingo sezinkinga ezibaluleke kakhulu. Ngokusekelwa kwamakhasimende kwe-NordVPN kwe-24/7, uhlala unomuntu okubuyisele,
Ukubulala inkinobho kufanele kufakwe manje kunoma iyiphi i-VPN. Kubalulekile ngoba noma ngabe ubhekene nokwehla kwenethiwekhi noma ukuphahlazeka kwesistimu noma ezinye izingqinamba zobuchwepheshe, i-VPN yakho izoxhumeka inqobo nje uma inkinobho yakho yokubulala ivuliwe.
Sihlala sithanda isoftware okulula ukuthi siyisebenzise, ​​okulula ukuthi siyiqonde, futhi engathathi ukucabanga okuningi. I-NordVPN ingenye ye-VPN enhle kakhulu esebenziseka kalula, futhi abasebenzisi bayathanda ukuyisebenzisa kuzo zonke izidingo zabo.
Zama i-NordVPN mahhala ukusebenzisa i-Netflix:
Noma nini lapho sifuna ukuthola noma yini, siyabona ukuthi singakwazi yini ukukuhlola mahhala. Ama-VPN amaningi anikela ngezilingo ezinkulu zamahhala, kepha uma kukhulunywa ngeNordVPN, bakholelwa ekukhokheni nasekuhlolweni. Banesiqinisekiso sokubuyiselwa imali esimangalisayo sezinsuku ezingama-30 zomsebenzisi wabo.
Ukufaka isicelo sesiqinisekiso sokubuyiselwa imali, kuzofanele uthenge noma yiziphi izinhlelo zabo ekhasini labo elisemthethweni lentengo. Zonke izinhlelo zabo zivulekile ukufaka isicelo sesiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Bheka inqubomgomo yabo yamanani ukwazi okwengeziwe ngemigomo nemibandela yesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30.
Intengo iyinto ethonya kakhulu uma kukhulunywa nganoma yisiphi isinqumo sokuthenga. Uma uthola okuthile ngentengo enkulu okwenza leyo nto ibize yonke imali, ngokuqinisekile uzoyifunelaIntengo yinto eyodwa engashintsha noma yimuphi umqondo womthengi. Uma unamanani entengo akhangayo, akekho ongavimba into yakho ukuthi ingathengisi ngokushesha.
Ama-VPN anezinhlu zamanani ezihlukile zezinye izici ezinikezayo. INordVPN inebanga lamanani ayo ahlelwe aba ama-3 amathathu, uhlelo lwenyanga, uhlelo lonyaka, nezinhlelo ezimbili zaminyaka yonke.Uhlelo lwenyanga luphelele ngentengo elungile, lumiswe ku- $ 11.95 ngenyanga, ungalusebenzisa futhi ulukhokhele njalo ngenyanga. Kuyabiza uma kuqhathaniswa nezinhlelo zaminyaka yonke nezimbili zonyaka, kepha uma ufuna ukuzama, qhubeka.
Uhlelo lwangonyaka luthengiswa ku- $ 4.92 ngenyanga. Uthola ukonga ama-58% ngalolu hlelo. Isikweletu sakho sizofinyelela ku- $ 59 kuphela ngonyaka futhi sikunikeze inzuzo ngentengo ehlekisayo. Kodwa-ke, uhlelo oludume kakhulu uhlelo lweminyaka emi-2 oluza nokonga okuphezulu kakhulu kumthengi.
Uhlelo lweminyaka emibili luthengiswa ku- $ 3.71 ngenyanga, okufika ku- $ 89 eminyakeni emibili yokuqala. Imali eyongiwe isiyonke ingama-68%. Akumangalisi lokho? Lolu uhlelo olunconywe kakhulu, futhi sicabanga ukuthi kufanele uluthathe.
1Q. Ngabe ngizozwa ukwehla kwejubane ku-NordVPN ngenkathi ngisakaza i-Netflix?
Iminyaka:Ukwehla kwejubane kuyinto edlange ngeVPN engenakugwemeka kakhulu. Ukuze uthole isipiliyoni sokusakaza okuhle kakhulu, kuzofanele ukhethe iseva elungile ukukusiza ukushelela okubushelelezi ngejubane eliphakeme.
2Q. Ingabe i-NordVPN inikezela ngesivivinyo samahhala?
Iminyaka:Izilingo zamahhala seziphelelwe yisikhathi manje njengoba ama-VPN amaningi eya ngenqubomgomo yokukhokha nokuhlola. INordVPN inesiqinisekiso sokubuyiselwa imali esimangalisayo kakhulu sezinsuku ezingama-30 ongafaka ngaso imali engu-100% ekubuyiseleni ekuthengeni kwakho kungakapheli izinsuku ezingama-30.
3Q. Ngingakhansela ukubhaliswa kwami ​​kwe-NordVPN nganoma yisiphi isikhathi?
Iminyaka:Ukufaka isicelo sokubuyiselwa imali, kuzofanele ukhansele okubhalisile ngaphambi kwezinsuku ezingama-30, noma kungenjalo kuzodingeka usebenzise i-VPN kuze kube usuku olubhalisiwe.
Akungabazeki ukuthi i-NordVPN iyi-VPN enhle kakhulu ekuvumela ukuthi usakaze i-Netflix ngasikhathi sinye ngenkathi ikunikeza izaphulelo ezinhle ekuthengeni kwayo.INordVPN iyakhula, ngakho-ke izokusiza ukuthi uphumelele ngenkathi ikuvikela futhi ikukhuthaze ukuphequlula okuphephile kuwe. Siyethemba ukuthi unombono ocacile wokuthi ungasithola kanjani isaphulelo sabo esihle kakhulu.
Kuyi-VPN yokuya kuzo zonke izidingo zakho ze-Netflix. Ngeminye imibuzo ngezaphulelo ze-NordVPN ne-NordVPN yeNetflix, zizwe ukhululekile ukusibuza ebhokisini lethu lengxoxo elingezansi. Ungasinika nempendulo yakho ebalulekile neziphakamiso ezithembekile.
Ama-akhawunti wamahhala weNetflix
cross platform xbox imidlalo eyodwa
amasayithi wokusakaza we-movie wamahhala we-hd
ukusakaza ama-movie wakamuva online mahhala
izingosi zama-movie zamahhala ezihamba phambili online
indawo enhle yokulanda ama-movie